သောသီခို: အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး (Office of the Senior Delegation) ဖွင့်လှစ်
အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး (Office of the Senior Delegation) ဖွင့်လှစ်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ အဆင့် မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုံး (Office of the Senior Delegation) ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း အသိပေး အကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်။
၁။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (The Senior Delegation for the Nationwide Ceasefire Agreement) သည် ၎င်း၏ရုံးကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး (Office of the Senior Delegation) တွင် Saw Aw Baw Mu မှ Director အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Salai Ram Kulh Cung မှ Associate Director အဖြစ်လည်းကောင်း၊ San Awng မှ Coordinator အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Salai Pan Tui မှ Administrative Assistant အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး (Office of the Senior Delegation) ကို email ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုလျှင် seniordelegationoffice.eao@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပါရန်နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်လိုပါက Director (+66) 0931326750 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Director ကို ဆက်သွယ်လို့မရပါက Associate Director (+66) 0987942137 နှင့် Coordinator (+66) 0801254059 တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Posted by PKD at 4:45 AM
Maw Tha said...
Hi Aung Baw Mu
I am glad that you guy can open office to represent the ethnics group for peace process.
But i worry about there are two Chin that will assist the office work.
In the third country Chin are not very different from Burmese people. May be worse than Burmese.
I don't see any bitter experiment in third country with Burmese people. With Chin people to us seen like there is no way we can trust Chin people to work together or cooperative in politic or community. Not only politic and community, even though religious cooperation it doesn't work. Not only in the third country. Even though in Burma Christian cooperation they are the worse group to deal with. What i want to say is be careful.
KKO ကလိုထူးဘော ထုတ်ပြန်ချက်
တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တ်ေလှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမ...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ အဆင့်မြင့်ညှိန...
ကချင်အမျိုးသားများအစည်းအရုံး (KNO) မှ ကော်သူးလေ ကရ...
KNU နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိဟု DKBA ပြေ...
KNU/KNLA တပ်မှူးများ ဗိုလ်ကျော်သက်နှင့် ဗိုလ်ဆန်...
NCA မူကြမ်းပါ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်ြး...
သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် - မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်...
ဗမာအစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးရန်အတွက် ရန်ကုန်တွင် ရောက်ရှ...
ISSI တို့ ကိုတိုက်ခိုက်သော အီရတ်နှင့် တာဂစ္စတန် နို...
BGF မောင်ချစ်သူအတွက် ပေးပို့ လာတဲ့စာ
DVB speaks to Karen power broker Naw Zipporah Sein...
“ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ဆိုတာ တပ်မတော် လက်ထဲမှာရှိ...
နောက်တဆင့်သွားဖို့ အာမခံချက်ရှိပြီဆိုရင် မနက်ဖြန်လ...
အာရှလမ်းမကြီး(မြန်မာပြည်) ၏ (မြ၀တီ-သင်္ဃန်းညီနောင်-ေ...
Speech of Saw Nerdah Bo Mya, Commander-in-Chief of...
“နီးစပ်ရာသူတို့ရဲ့ ယန္တရား၊ အဆောက်အဦတွေကို ၀င်ရောက...
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၁ နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ဒီကေဘီအေ ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံကို မြန်မာစစ်တပ် ဖမ်းဆီး
အာရှအဝေးပြေးလမ်းမစီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြ...
တစ်မတ်သား ဗီတိုကိုင်ပြီး ပိတ်ဆို့နိုင်တာ လူထုသိသွာ...
ဆောင်းပါး တိုင်းရင်းသားများ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘာကြောင...
အစိုးရကိုယ်စားလည် နှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်မ...
အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ...
ကရင်အမျိုးသား အကြိုညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသာ...
DVB - ကရင်ပြညနယ်စီမံကိန်းတွေ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့သဘော...
နိုင်ငံအမည်၊ လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြသာန...
(၆၆) နှစ်မြောက် ကရင့်အမျိူးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မေ...
လော်ခီးလာ ပြင်ဆင်ချက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်ထာ...
နှစ်ဘက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှော...
၀န်ကြီးချုပ်တင်မြောက်ရေး တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား...